HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDHMİ 9 waxay ku dhawaaqdaa Sawirro bille ah
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Madaarada, WADADA, Headline, TURKEY 0
dhmi wuxuu ku dhawaaqayaa tirooyin bille ah
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), sanadka 2019 ee bisha Sebtember diyaaradda, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca ka qaaday.
Sidaas awgeed, bishii Sebtember; Tirada duulimaadyada tagaya iyo bixitaanka garoonka diyaaradaha waxay ahaayeen 77.365 duullimaadyada gudaha iyo 75.465 duullimaadyada caalamiga ah. Wadarta guud ee taraafikada diyaaradaha ee loo adeegay waxay gaareen 194.923 oo leh xad dhaaf.
Bishii September, Turkey u adeega gaadiidka rakaabka guriga garoomada diyaaradaha ee guud ahaan 8.668.089, 12.240.602 ahaa gaadiidka rakaabka caalamiga ah. Wadarta guud ee gawaarida rakaabka ee wata rakaabka safarka tooska ah ayaa la xaqiijiyey inuu yahay 20.929.426.
Gawaarida xamuulka (xamuulka, boosta iyo boorsada) taraafikada; Laga soo bilaabo Sebtember, tan oo ah tan 81.084 ee khadadka maxalliga ah iyo tan tan tan ee 244.718 ee khadadka caalamiga ah ayaa wadarta wadarta tan ee 325.802 tan.
9 BILOOD (JANUARY-SEPTEMBER) AIRCRAFT, PASSENGER iyo LOAD TRAFFIC
2019 illaa dhammaadka Sebtember; Gaadiidka Diyaaradaha ee tagaya iyo ka soo degaya garoonka wuxuu ahaa 636.771 duullimaadyada gudaha iyo 554.646 duullimaadyada caalamiga ah. Sidaa darteed, wadarta guud ee duulimaadyada waxay gaareen 1.550.588 oo leh xad-dhaafyo.
Turkey 76.431.401 oo ka mid ah garoomada diyaaradaha gaadiidka rakaabka qoyska guud, halkaas oo gaadiidka rakaabka caalamiga ah inta lagu jiro xilliga this of 84.828.052 rakaab ah transit toos ah si wadajir ah ula guud ee gaadiidka rakaabka ee 161.482.868 istaagay.
Gawaarida xamuulka (xamuulka, boosta iyo boorsada) taraafikada; 626.460 tan oo khadadka maxalliga ah iyo tan tan tan ee 1.865.412 tan ee khadadka caalamiga ah.
Diyaarad soo dejinta iyo ka degista garoonka diyaaradaha ee Istanbul bishii Sebtember waxay noqotay 9.369 duullimaadyada gudaha, 28.960 duullimaadyada caalamiga ah iyo wadarta guud ee 38.329. Wadarta guud ee rakaabka 1.483.994, oo ay ku jiraan 4.783.667 ee khadadka gudaha iyo 6.267.661 ee khadadka caalamiga ah, ayaa la xaqiijiyey.
Gegada diyaaradaha ee Atatürk, halkaasoo howlaha guud ee duulista iyo rarka xamuulku ay sii socdaan, Gawaarida 2019 ayaa la xaqiijiyey Janaayo-Sebtember muddadii 130.229. Gegada diyaaradaha ee Atatürk, Rakaabka 16.072.534 waxaa loo adeegsaday muddadii u dhaxeysay Janaayo-Abriil ilaa furitaanka Garoonka Diyaaradaha Istanbul.
Diyaaradda 222.435 iyo rakaabka rakaabka ee 35.574.890 waxay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha sagaal bilood gudahood. Markaa, kaliya gaadiidka duullimaadka ee 352.664 iyo rakaabka rakaabka ee 51.647.424 ayaa lagu xaqiijiyey labadan garoon diyaaradeed.
9 BILAHA XAALADAHA, JOOJINKA IYO KHATARKA LOAD EE XARUNTA TUUQADDA
Tirada rakaabka ee ku adeegta duullimaadyada billaha ah ee 9 ayaa ka sarreeya 47 milyan oo garoomada diyaaradaha ku teedsan, halkaas oo taraafikada caalamiga ahi ay culus tahay. Gaadiidka rakaabka ee loo yaqaan '16.035.492' ee khadadka maxalliga ah, 31.556.514 ee khadadka caalamiga ah; taraafikada hawada waxay ahayd 121.877 duullimaadyada gudaha iyo 184.790 duullimaadyada caalamiga ah.
9 xogta billaha ah ee garoomadayada xarumaha xarumaha dalxiiska waa sida soo socota:
Gegada Diyaaradaha Izmir Adnan Menderes waxay heshay adeegyo 6.875.544 duulimaadyo gudaha ah, adeegyo 2.686.942 ah oo ku saabsan duulimaadyada caalamiga ah iyo wadarta rakaabka 9.562.486.
Madaarka Antalya, wadarta rakaabka 5.399.599 ayaa loo adeegsaday, oo ay ku jiraan 23.929.236 gudaha ah iyo rakaab caalami ah oo 29.328.835 ah.
Madaarka Muğla Dalaman, wadarta guud ee rakaabka ee 1.280.104, oo ay ku jiraan 2.711.541 duullimaadyada gudaha iyo 3.991.645 ee duullimaadyada caalamiga ah, ayaa la xaqiijiyey.
Gegada Diyaaradaha Muğla Milas-Bodrum waxay leedahay tirada rakaabka gudaha ee 2.089.603 iyo tirada rakaabka caalamiga ah ee 1.702.491. Wadarta rakaabka 3.792.094 ayaa loo adeegay.
Tirada rakaabka gudaha iyo dibedda ee garoonka diyaaradaha Gazipaşa Alanya waxay ahayd 390.642. Tirada guud ee rakaabka waxay gaartay 526.304.
DHMI waxay furtaa rakaabka, diyaaradaha iyo gawaarida xamuulka bisha Febraayo 06 / 03 / 2019 Agaasimaha Guud ee Hay'adda Maareynta Maareynta Duulimaadka (DHMI) ayaa ku dhawaaqay tirakoobyada hawada, rakaabka iyo rakibaadaha bilaha February ee 2019. Sida laga soo xigtay, Febraayo 2019; Duulimaadyada duulimaadyada iyo diyaaradaha hawada ayaa ahaa 60.198 khadadka gudaha iyo 37.037 khadadka caalamiga ah. Gaadiidka gawaarida ee isla bishaas ayaa loo aqoonsaday inay yihiin 33.253. Sidaa daraadeed, wadarta gawaarida diyaaradeed ee ka shaqeynaysay hawada ayaa gaaray 130.488 iyada oo kor u dhaaftay. Garoomada guud ahaan Turkey bishan 7.618.937 gaadiidka rakaabka guriga, halka gaadiidka rakaabka caalamiga ahaa 5.131.874. Sidaa darteed, bisha dhexdeeda su'aasha ah, wada jir
DHMI waxay ku dhawaaqday Jaantusyada Julaay 07 / 08 / 2019 Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMİ), 2019 sano ee Juulaay, duulimaadyada diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka ayaa shaaca ka qaaday. Marka loo eego, 2019 bishii Luulyo; Gaadiidka diyaaradda ee tagaya iyo ka soo degaya garoonka wuxuu ahaa 79.311 duullimaadyada gudaha iyo 83.547 duullimaadyada caalamiga ah. Gawaarida dusha sare ee isla bishaas waxay ahayd 44.660. Markaa, wadarta guud ee taraafikada hawadu ka adeegto marin-haweedka waxay gaareen 207.518 oo leh xad-dhaafyo. Garoomada guud ahaan Turkey bishan 9.122.161 gaadiidka rakaabka guriga, halka gaadiidka rakaabka caalamiga ahaa 12.897.411. Marka, wadarta guud ee rakaabka ee wata rakaabka safarka tooska ah ee bisha la sheegay ...
Garoomada State Authority General Manager Funda ee January, 'DHMİ Running Turkey Dayuurada' 29 / 01 / 2019 Garoomada State Maareeyaha Guud ee Maamulka iyo Guddoomiyaha Funda ee January, siiyey warbixin ku saabsan mashaariicda socda share in xisaabta Twitter-ka rasmiga ah. Halkan ayuu qaybsada Maareeyaha Guud ee January: Our dalka, gaadho tallaabo muhiim ah oo duurka ku Duulista muujinaya koritaanka ugu dhaqsiyaha badan ee Europe, dunida oo dhan ayaa gaadhay heer ah kaas oo la ixtiraamo indhaha Duulista ee. siyaasadaha gaadiidka codsatay in baadi-goobka guul this shaki la'aan waa sannadkii la soo dhaafay 17 graphic ahayd wax ku ool ah. Our dalka, adduunka ee facooda kuu sheegi karaan garoomada kale oo badan oo casri ah iyo boosteejada u qalabaysan. DHMI waa shirkad caalami ah marka la eego hawlgalka iyo kaabayaasha horumarsan ee farsamada ee mashruucyada waaweyn ee Hay
Sarkaalka-Sen Hung Hunger-Saboolnimadu wuxuu ku dhawaaqayaa Tirada Bilaha Abriil 09 / 05 / 2017 Sarkaalka-Sen gaajo-saboolnimada ku dhawaaqday tirooyinka April: Sarkaalka-Sen bil walba si joogto ah u qabtay "by ay gaajo-saboolnimada" cilmi, marinka gaajo 4 dadka ee qoyska ka mid ah in Turkey 1.725,18 TL, line saboolnimada waa la dhigay at 4.715,65 TL. Sarkaalka-Sen ee April, sida ay sheegtay cilmi-gaajo-saboolnimada sameeyay si joogto ah bil kasta by marinka gaajo dadka Confederation 4 1.725,18 ee qoyska ka mid ah in Turkey TL, line saboolnimada ay ka go'antahay sidii per 4.715,65. Sida laga soo xigtay cilmibaarista, qiimaha cuntada ee bishii Abriil marka la barbardhigo celceliska heerka 0,49'lu boqolkiiba ayaa hoos u dhacay. Kororka ugu weyn ee Abriil waa yaanyada, iyadoo korodhka 61,03 boqolkiiba
Sarkaalka-Sen Hung-Cows-ka ayaa laga yaabaa in la soo saari karo Lambarada 08 / 06 / 2017 Sarkaalka-Sen gaajo-saboolnimada ku dhawaaqday Tirada May Month: Sarkaalka-Sen by si joogto ah la sameeyay bil walba, "sida ay gaajo-saboolnimada" Waxaa laga yaabaa natiijooyinka cilmi-baarista ee bisha ah, marinka gaajo 4 dadka ee qoyska ka mid ah in Turkey 1.696,35 TL, line saboolnimada waa la dhigay at 4.721,80 TL . Sarkaalka-Sen Confederation si joogto ah la qabtaa bil walba by cilmi gaajo-saboolnimada Sida ay qoys ee Turkey ee marinka gaajo May 4 1.696,35 £, line saboolnimada ay ka go'antahay sidii per 4.721,80. Sida laga soo xigtay daraasadda, qiimaha cuntada bishii May ayaa hoos u dhacay celcelis ahaan 1,67 boqolkiiba marka la barbar dhigo bishii Abriil. Korodhka ugu weyn ee bisha May waa boqolkiiba
DHMI waxay ku dhawaaqday Jaantusyada Julaay
Sarkaalka-Sen Hung Hunger-Saboolnimadu wuxuu ku dhawaaqayaa Tirada Bilaha Abriil
Sarkaalka-Sen Hung-Cows-ka ayaa laga yaabaa in la soo saari karo Lambarada
Wasaaradda Ganacsiga oo Soo Bandhigtay Sawirada Soo Dejinta iyo Soo Dejinta
DHMI oo ku dhawaaqday '5 74 Milyan oo dad ah oo Bilowday'